နေရောင်ခြည်ပြက္ခဒိန်: ဘာလဲ၊ လက္ခဏာများနှင့်ဇာစ်မြစ် | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 23/11/2021 16:00 | သိပ္ပံ
ကျွန်တော်တို့အားလုံး လိုက်နာကျင့်သုံးနေကြပါပြီ။ နေရောင်ခြည်ပြက္ခဒိန် ဒါပေမယ့် ဘယ်ကလာတယ်၊ ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကို တော်တော်များများ မသိကြဘူး။ မတူညီသော အမျိုးအစားများကို ရှာဖွေနိုင်သော ပြက္ခဒိန်တစ်ခုအပြင်၊ ၎င်းသည် လပြက္ခဒိန်နှင့် ကွဲပြားကြောင်း ထင်ရှားသည်။ ၎င်းတွင် ထူးခြားသော ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီး ၎င်းတို့သည် ဤနေရာတွင် မှတ်သားထိုက်ပါသည်။
ထို့ကြောင့်၊ နေရောင်ခြည်ပြက္ခဒိန်သည် အဘယ်အရာ၊ ၎င်း၏ဇာစ်မြစ်နှင့် ၎င်း၏အဓိကလက္ခဏာများအားလုံးကို သင့်အားပြောပြရန် ဤဆောင်းပါးကို ရည်ညွှန်းပါမည်။
1 နေရောင်ခြည်ပြက္ခဒိန်ဆိုတာ ဘာလဲ။
2.1 အပူပိုင်းဒေသ နေရောင်ခြည်ပြက္ခဒိန်များ
2.2 Sidereal နေရောင်ခြည်ပြက္ခဒိန်များ
3 လပြက္ခဒိန်မှ ကွာခြားချက်များ
နေရောင်ခြည်ပြက္ခဒိန်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝများကို အုပ်ချုပ်သည့်ပြက္ခဒိန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 365 1/4 ရက်ရှိသော ရာသီအလိုက် ချိန်းတွေ့သည့်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာသည် နေကို လှည့်ပတ်ရန် လိုအပ်သော အချိန်ဖြစ်သည်။.
အီဂျစ်လူမျိုးများသည် နေရောင်ခြည်ပြက္ခဒိန်ကို ပထမဆုံးတီထွင်ခဲ့သူဖြစ်ပုံရသည်။ အရှေ့ဘက်ကောင်းကင်တွင် ခွေး-Sirius (Sothis) သည် နိုင်းမြစ်ရေလွှမ်းမိုးသည့်နှစ်နှင့် တိုက်ဆိုင်ပြီး နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သတ်မှတ်ထားသော အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ပြက္ခဒိန်ကို ၃၆၅ ရက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် 365 လ၊ တစ်လလျှင် ရက် 12 နှင့် နှစ်ကုန်တွင် 30 ရက်ပေါင်းထည့်သောကြောင့် ၎င်း၏ပြက္ခဒိန်သည် တဖြည်းဖြည်း မှားယွင်းသွားစေသည်။
Egyptian Ptolemy III Euergetes သည် အခြေခံ 365 ရက်ကြာ ပြက္ခဒိန်တွင် တစ်ရက်ကို ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ Canopus အမိန့် (237 BC) တွင် လေးနှစ်တစ်ကြိမ် (ဤအလေ့အကျင့်ကို ဘီစီ 312 တွင် လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သော Seleucid ပြက္ခဒိန်တွင်လည်း ထည့်သွင်းခဲ့သည်)။
ရောမသမ္မတနိုင်ငံ၌ ဘီစီ ၄၅ တွင် ဧကရာဇ် ဆီဇာ၊ ဂရိလပြက္ခဒိန်ကိုအခြေခံသည့် Julian ပြက္ခဒိန်ဖြင့် ဖရိုဖရဲဖြစ်နေသော Republican Roman ပြက္ခဒိန်ကို အစားထိုးခဲ့သည်။ Julian ပြက္ခဒိန်သည် ဖေဖော်ဝါရီလမှ 45 ရက်အထိ ရက် 30 သို့မဟုတ် 31 ရက်သတ်မှတ်ထားသည်။ ရက်ထပ်နှစ်ကို လေးနှစ်တစ်ကြိမ် ခွင့်ပြုသည်။ သို့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင်၊ Julian ပြက္ခဒိန်သည် တစ်နှစ်လျှင် တစ်ရက်၏လေးပုံတစ်ပုံကို ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် နေရောင်ခြည်နှစ်ကို ရှည်ကြာစေသည်။ နေရောင်ခြည်နှစ်သည် အမှန်တကယ် 11 ရက်ဖြစ်သည်။
10 ရာစုအလယ်တွင် အချိန်ပိုသည် 1582 ရက်ခန့် ဆက်တိုက်အမှားအယွင်းဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဤအမှားကိုပြင်ရန်အတွက် Pope Gregory XIII သည်5တွင် Gregorian ပြက္ခဒိန်ကို 14 ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ 400 ရက်မှ 1700 ရက်နေ့အထိ ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ရက်ထပ်နှစ်များကို 1800 ဖြင့် ခွဲ၍မရနိုင်သော နှစ်တစ်ရာဖြစ်သောကြောင့် ဥပမာအားဖြင့် 1900၊ XNUMX နှင့် XNUMX တို့ဖြစ်သည်။ .ရှင်းလင်းချက်အားလုံးမှနေရောင်ခြည်ပြက္ခဒိန် အမျိုးအစားအမျိုးမျိုး ပေါ်လာပြီး တည်နေရာအလိုက် အမှတ်အသားပြုထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လက်ရှိ ဂရီဂေါရီးယန်းပြက္ခဒိန်သည် ဂရီဂေါရီးယန်းပြက္ခဒိန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော် အခြားဂရီဂိုရီယန်ပြက္ခဒိန်များကို သိရှိပါက ထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ။
အပူပိုင်းနေရောင်ခြည်ပြက္ခဒိန်သည် အပူပိုင်းဒေသနှစ်များက လွှမ်းမိုးထားသည့် ပြက္ခဒိန်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ကြာချိန်မှာ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 365 ရက်၊5နာရီ 48 မိနစ်နှင့် 45 စက္ကန့် (365,24219 ရက်) ဖြစ်သည်။ အပူပိုင်းနှစ်သည် နွေဦး သို့မဟုတ် ဆောင်းဦး equinox မှ နောက်နှစ်အထိ ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် နွေရာသီ သို့မဟုတ် ဆောင်းရာသီမှ နောက်တစ်ခုအထိ။
ယနေ့ ဂရီဂေါရီးယန်းပြက္ခဒိန်တွင် ပုံမှန်နှစ်တွင် 365 ရက်ရှိသော်လည်း အပူပိုင်းနှစ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လေးနှစ်တိုင်းနီးပါး ရက်ထပ်ရက်ထပ်ထည့်ပါသည်။ ရက်ထပ်နှစ် အရေအတွက် မှန်ကန်ခြင်းမရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြက္ခဒိန်သည် အမြန်ထပ်တူကျပါမည်။ ရက်ထပ်နှစ်များစွာရှိသော ဂျူလီယန်ပြက္ခဒိန်တွင် ၎င်းသည် ဖြစ်ပျက်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ၎င်းကို Gregorian ပြက္ခဒိန်ဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။
အီရန်ပြက္ခဒိန် (Jal_li ပြက္ခဒိန်)
ဤပြက္ခဒိန်တစ်ခုစီတွင် 365 ရက်ကြာနှစ်ရှိပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ရက်ထပ်နှစ်တစ်ခုအဖြစ် ထပ်လောင်းထည့်ခြင်းဖြင့် ချဲ့ထွင်သည်။ ထည့်သွင်းထားသော ရက်စွဲများကို "တုန်လှုပ်စေသည်" ဟူသော ဤနည်းလမ်းကို "ပေါင်းစပ်" ဟုခေါ်သည်။ ထို့အပြင် Zoroastrian ပြက္ခဒိန်လည်းရှိသေးသည်။ ၎င်းသည် Zoroaster ကိုးကွယ်သူများအတွက် ဘာသာရေးပြက္ခဒိန်ဖြစ်ပြီး အပူပိုင်းနေရောင်ခြည်ပြက္ခဒိန်၏ အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သည်။
ဘင်္ဂလီပြက္ခဒိန်သည် စတားလာနေရောင်ခြည်ပြက္ခဒိန်၏ အကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အများအားဖြင့် 365 ရက်ဖြစ်ပြီး ရက်ထပ်နှစ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန် တစ်ရက်ဖြစ်သည်။ နေရောင်ခြည် ၁၂ လကို ရာသီခြောက်ခုအနက်မှ တစ်ခု (ရာသီတစ်ခုစီတွင် နှစ်လ) အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ လတိုင်းသည် တိကျသော ကြယ်စုတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။
ဒီပြက္ခဒိန်အမျိုးအစား ၎င်းတို့ကို ဗေဒင်ဟောရန်အတွက် အသုံးပြုကြပြီး မတူညီသော ဘာသာတရားများတွင် အရေးကြီးသော အဓိပ္ပါယ်များရှိသည်။ ဤပြက္ခဒိန်သည် စန္ဒြလကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘင်္ဂါလီပြက္ခဒိန်ကို လ-နေရောင်ခြည်ပြက္ခဒိန်ဟုလည်း ခေါ်သည်။
အောက်ပါတို့သည် sidereal ဆိုလာပြက္ခဒိန်များဖြစ်သည်-
နေ၏ရွေ့လျားမှုအပေါ်အခြေခံ၍ နေရောင်ခြည်ပြက္ခဒိန်ကို မည်သို့မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီး လူအများနှင့် ပိုမိုရင်းနှီးသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် လပြက္ခဒိန်အကြောင်း ပြောရမည်ဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် တစ်ခုတည်းသောပြက္ခဒိန်မဟုတ်ပေ။ လ၏ မတူညီသော အဆင့်များဖြင့် အုပ်ချုပ်သည်။. ဤနည်းအားဖြင့်၊ နေရောင်ခြည်ပြက္ခဒိန်သည် လများကို တွက်ချက်ရန် လကိုအသုံးပြုသည့် လပြက္ခဒိန်နှင့် သိသိသာသာကွာခြားပါသည်။ ပြက္ခဒိန်နှစ်ခုသည် လများကိုတိုင်းတာရန် မတူညီသောနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုသော်လည်း၊ နှစ်ခုစလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ကို တိကျစွာခြေရာခံပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကို စီမံခန့်ခွဲရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ လပြက္ခဒိန်နှင့် နေရောင်ခြည်ပြက္ခဒိန်ကြား အထင်ရှားဆုံး ကွာခြားချက်မှာ အချိန်၏ဖြတ်သန်းမှုကို တိုင်းတာရန် အသုံးပြုသည့် ကောင်းကင်ဘုံများဖြစ်သည်။ လပြက္ခဒိန်သည် အချိန်ကိုတိုင်းတာရန် လ၏အဆင့်ကို အသုံးပြုသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် တစ်လသည် လဆန်းနှင့် လဆန်းကြားကာလဖြစ်သည်။ နေကိုလှည့်ပတ်ရန် ကမ္ဘာမြေကြီးလိုအပ်သောအချိန်သည် နေရောင်ခြည်နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်သည်။
နေရောင်ခြည်ပြက္ခဒိန်သည် အများအားဖြင့် vernal equinoxes ကြားအချိန်ကို တိုင်းတာသည်။ လသည် ကမ္ဘာကို လှည့်ပတ်ရန် တစ်ချိန်တည်း အချိန်ယူရသောကြောင့် လသည် ကမ္ဘာကို အမြဲတစေ တူညီသော မျက်နှာကို ပြသသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်း၏အခြားအစွန်းရောက်မှုကို တစ်ခါမျှမတွေ့ဖူးပေ။ လဆန်းများသည် ၂၉.၅ ရက်တိုင်းတွင် ပေါ်လာသည်။ နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များက လဆန်းများကြားရှိအချိန်ကို synodic moon ဟုခေါ်သည်။
လူတွေဖန်တီးတဲ့ လပြက္ခဒိန်အားလုံးဟာ နေရောင်ခြည်ပြက္ခဒိန်မှာ ရှာတွေ့နိုင်တဲ့ လတွေ မဟုတ်ဘဲ စုပေါင်းလတွေအပေါ် အခြေခံပါတယ်။ တကယ်တော့ နေရောင်ခြည်ပြက္ခဒိန်ကို လပြက္ခဒိန်နဲ့ မတူဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ ပုံမှန်အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ လတစ်ခုအနေနဲ့ တည်ထောင်ထားပါတယ်။ ကောက်ပဲသီးနှံများနှင့် Esoteric ဘာသာရပ်များအတွက် အသုံးများဆုံးဖြစ်သည်။
သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ လနှင့်နေရောင်ခြည်ပြက္ခဒိန်အကြား ခြားနားချက်များစွာရှိသည်။ ဤအချက်အလက်ဖြင့် နေရောင်ခြည်ပြက္ခဒိန်၊ ၎င်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ၎င်း၏ဇာစ်မြစ်အကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » သိပ္ပံ » နေရောင်ခြည်ပြက္ခဒိန်